IHans Airways isayina Incwadi Yenhloso ye-Airbus A330-200 entsha
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Airlines » IHans Airways isayina Incwadi Yenhloso ye-Airbus A330-200 entsha
Airlines • Airport • zezindiza • Izindaba Ezintsha zaseYurophu • Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Ukuhamba Ngebhizinisi • Investments • Izindaba • Abantu • Ezokuvakasha • Izindaba Zocingo Lokuhamba • Izindaba ze-UK Breaking
IHans Airways isayina Incwadi Yenhloso ye-Airbus A330-200 yayo yokuqala entsha
I-A330 izobhaliswa njenge-G-KJAS, okuzothatha isibongo somunye wabatshalizimali bokuqala abayinhloko be-Hans Airways, okholelwa kumodeli yenkampani yezindiza zomphakathi kusukela kwasungulwa iphrojekthi ngo-2019.
UHans Izindiza, inkampani yezindiza entsha yase-UK, elungiselela ukwethula izindiza ezihleliwe eziya e-India kulo nyaka, iyajabula ukumemezela ukuthi inendiza yayo yokuqala evikelekile - isayina Incwadi Yenhloso ye Airbus I-A330-200 (MSN 950) evikini lokuqala lonyaka omusha. Indiza ibisebenza nenkampani yezindiza ehamba phambili yaseYurophu kusukela ngo-2008, yakhiwe ngendlela enamakhabethe amabili, iHans Airways ezosebenza ngayo enezihlalo zomnotho ezingama-275 kanye nezingu-24 ezisezingeni eliphezulu.
I-A330 izobhaliswa njenge-G-KJAS, ithathe isibongo somunye we UHans Izindiza' abatshalizimali bokuqala, abakholelwa kumodeli yabo yendiza yomphakathi kusukela le phrojekthi yasungulwa ngo-2019.
“Sijabule ngokufinyelela lesi sinyathelo esibaluleke kangaka ohambweni lwethu lweminyaka emibili,” kusho UHans Izindiza' Isikhulu esiphezulu Satnam Saini. “Isikhungo sethu sokusebenza esihleliwe ku- Airbus I-A330, indawo edumile futhi evulekile yokuhamba ngezinyawo, ilungele futhi impahla, futhi sibonga wonke umuntu osisizile ukuthi samukele lesi sivumelwano ekuqaleni konyaka omusha.”
Isizinda sase-UK eBirmingham
UHans Izindiza ufake isicelo ku-UK Civil Aviation Authority ukuze uthole Isitifiketi Somsebenzi Womoya futhi unethemba lokuthola isimo kusenesikhathi ukuze aqale isevisi yemali engenayo kuleli hlobo. Inkampani yezindiza izosebenza emadolobheni esibili e-India isuka esikhumulweni sezindiza i-Birmingham. Isicelo sayo Selayisensi Yokusebenza kanye Nelayisense Lomzila sesivele sishicilelwe yi-UK CAA.
Ukuqeqeshwa kwabashayeli bamabhanoyi namakhebhini kuqale ngoJanuwari 3
Iqoqo lokuqala labasebenzi basendizeni (abashayeli bezindiza abane nabasebenzi basemakhabetheni) baqale usuku lwabo lokuqala lokuqeqeshwa ngoJanuwari 3rd e-Crawley, e-UK nozakwethu oqeqeshelwa indiza ye-Hans Airways i-IAGO Flight Training kanye ne-L3 Harris Commercial Aviation yesifanisi. Abasebenzi abasha bamukelwe u-Satnam Saini, umtshali-zimali u-Kirpal Singh Jass, kanye no-Nathan Burkitt, Umqondisi Wenkampani Yezindiza Yokusebenza Nokuqeqeshelwa Kwabasebenzi.